Boga hooyo macaan iyo geeraaryo english ah
Boga Hore igala So Xiriir ila Qosol Hooyo macan Boga Jaceylka Gabayo Tariiqda Somalia qisasul anbiyaa Heso Qoraal Heeso Wadani Sheekoyin Ciyaaraha Qur.aan Diinta Islaamka Asxabta Rasulka Sirada Nabiga SCW The Best Mosque Aroos Cajib ah Photo,s
DEAR MAMA Allah Loves Those Who Love You OH You. Who Has The Sweetest Name
aduunka inaataan ku noolaa
weli ma arga adoo kale (Ilove you?
If love was blindness I would never see If love was darkness I would never be free If love was heartless I would feel no pain If love was mindless There would be no shame If love was music I would always dance If love was you I would take a chance If love was poetry I would always write If love was a star I would see the light But if love was blackness I would finally understand And if love was the devil I would even take his hand.
I want to thank you for being there when no one else showed they cared.
In the time I needed you most, to give a shoulder to cry on.
When you listened to all my problems such as boys, school etc.
You told me everything would be okay. You are not just my mom,
you are my friend, my soul, my life by my side. To comfort me when in need.
To give me a helping hand, or just by showing you care.
You have always stood by me no matter what I've done and that I am so thankful for.
Your eyes are the kindest I've ever seen.
I'll always hold you dear to me.
With out you in my life I wouldn't be as strong and bold
You give me strength in everything you do.
And again I want to thank you for everything you do.
ilove you dear mama
I can't promise you that tomorrow will be perfect or that life will be easy But I can promise that I'll always be there for you
I love the way I know you'll never give up on me
Maansada Hooyo waxa ay ka mid tahay heesaha Hadraawi ee maanka dadka sida isku midka ah u wada abbaara ee u taabta, una soo jiita nuxur ahaan iyo hab-dhaca farshaxan ahaaneedba. Heesta hooyo waxa ay ka awaale-warramaysaa qaayaha i yo lagama maarmaannimada madhaafaannimo ee hooyada. Ujeeddada curinta maansadan keentay ee ka dambaysa ayaa ku taxmaysa laba munaasibadood oo wakhti dheeri uu u dhexeeyo (soddon ku dhowaad sannadood). Waxa ay labada wakhti kala ahaayeen: Mar Hadraawi oo caydi ah (carruur ah) oo miyi jooga iyo marka kale oo ah Maxamed Ibraahim oo Gadh-madoobe ah (nin weyn ah) oo Muqdisho jooga. Dhacdadii koowaad: Seben hore Maxamed Ibraahim Hadraawi oo da’diisu ay aad u yar tahay (ilaa lix jir ah), ayaa waxa habeen lagaga hor tegayaa Ardaa geel; meel cidla’ ah isaga oo ku gataati dhacay oo ku gam’ay. Waxa ay ahayd xilli roobab-bow ah oo cirku cusub yahay oo uu da’ayo. Markii geela la soo xareeyey ee la maalay ayaa raggii guryaha oo xerada geela ka go’an u hurdo tegayaan oo qabteen. Geelii oo xaraysan iyo Maxamed oo sardho ku qasayana, waxa lagaga tegayaa ardagii cidla’ciirsilada ahaa. Habeen badhkii ayaa geelii oodda jabsanayaa oo xeradii ka daatay. Hal duq ah oo Hadraawi tilmaamay in ay geela in badan oo ka mid ahi ay iyada (hashaas) ka soo jeedaan oo ka soo farcameen, ayaa da’ iyo culays dartii la kici waydey oo golihii kula soo hadhaysa Hadraawi oo sanqadhii geela ku baruurugey oo toosay, haseyeeshee is gaabinaya oo is nabaya, kana baqaya libaax ‘amtaa’ haya oo ciyaya. Arlada waxa waagaas lagu yiqiin libaax dad-qaad ah oo dad iyo duunyaba aan kala hambayn. Hadraawi markii uu u adkaysan waayey gurxankii iyo goohii ‘giida’ libaaxa oo marba marka ka sii dambeeya ku soo dhowaanaysa, ayaa waxa uu dhinaciisu xejin waayey dhulka, waxanu ku gurguurtey oo galay mus-sareedkii ardaaga. Libaaxii ayaa ku soo biiraya oo yimid golihii Hadraawi iyo hashu ku sugnaayeen. Libaaxii oo xarrago tiicaya ayaa muskii ardaaga ee Hadraawi ku jirey inta uu baasha ka dhaafay, waxa uu dalaq yidhi oo ka gelay xera-geeshii halkii geelu bannaystay ee uu ka daatay. Hashii duqda ahayd oo raamsanaysa, iskana fadhida, ayaa libaaxii gol-jilicda dhuftay oo inta uu micida ka geliyey biyo ka soo daayey. Biyihii oo dhulka is-wadhay inta uu dhabaqsaday oo hirqaday, kana dhergey, ayaa Hadraawi oo arkaya inta uu libaaxii is kala bixiyey oo bunaaxin (ci’dheer) ku dhuftay oo baalla-daymooday uu iska dhaqaaqay. Libaax kale oo ci’dii kii hore maqlay ayaa isna soo daba- maray oo inta uu duqdii uus-miirtay isna iska hulleelay oo iska tegey.Sida Maxamed Ibraahim Warsame laftiisuba tilmaamay, waxa daqiiqadaha habeenkaasi uga dhignaayeen Sannado, dhulkii ayaana cidhiidhi ku noqday oo naftii ayaa isugu timid naxdin iyo baqdin darteed. Isaga oo weli muskii ku jira, ayaa waxa uu maqlayaa dhawaaq dumar oo dhanka guriga ka soo yeedhaya, kuna celcelinaya oo leh: “Alla hoogey Maxamedow”! ‘waan iska dhega-maray oo lama hadlin’ ayuu yidhi. Waayo waxa jirey buu yidhi “ sheeko carruureed ku saabsanayd in Bahal Madax-kuti la yidhaahdaa ay habeenkii qof inta ay iska soo dhigto oo magaca qofka ay doonayso in ay cunto ay ugu yeedho ay sidaas ku hesho, uguna cunto”. Bahashaas ayaa Hadraawi moodey in ay isaga libaaxii u soo daba marayso, dhulkii ayaanu isku sii nabay. Codkii ayaa u soo dhowaadey, waxanu indhaha qac ku siiyey qof dumar ah oo ardaagii taagan oo leh “ Alla ba’ay oo hoogey libaaxii ayaa qaatey”. ‘Waan u sii fiirsadey’ buu yidhi. Dabadeed waxa uu Hadraawi aqoonsanayaa in aanay meesha Madax-kuti jirine, qofka goobta joogaa uu yahay Hooyadii Gacaliso Kaaha Jaamac Buux. Neef kulul ayaa Maxamed ka soo boodaysa, waxana tin iyo cidhib dhammaynaysa oo saaqday jidhiidhico la yaab leh. Isaga oo aan is-ogayn inta uu muskii ardaaga ee uu ku loohnaa (isku qarinayey) ka soo boodo, kana soo baxo ayuu ‘Hooyo hee’ yidhi oo ‘haaw’ gosheeda ku soo odhanayaa, iyana inta ilmo farxadi waa naxdina ay ka soo qubatay ayay ‘dug’ dushiisa ku tidhi! Kaaha Jaamac waxa ay dhinaca Aqalkii qoyska u daadihinaysaa inankeeda Maxamed Ibraahim. Waxa uu Maxamed guriga ugu tegey Aabbihii Ibraahim Warsame (walan-wal) oo iska hurda oo aan ‘baddaaba hayn’. Maxamed oo da’diisu aad u yarayd wuu la yaabay sida wax u dhacayeen, waxanu isla goobtii (aqalka dhexdiisa) isku waydiiyey su’aalo badan. Waxa uu iskula sheekaystay oo yidhi: “Aabbahaa nin buka ma ahayn, nacasna kuma aanad ogayn, fulena laguma xamanayn ee tolow waa maxay sababta isagana seexisey, hooyadaana ledista iyo jiifka u diiddey. Waxa xiskiisa ku soo noqnoqonayey sababta waxaas oo khatar ah habeenkaasi madow soo dhex marisey ee ugu keentay cidladii libaaxyadu ka goohayeen?! Hadraawi habeenkaas waxa uu guntaday kala duwanaanshaha weyn ee u dhexeeya kasha iyo dareenka labada waalid (Hooyada & Aabbaha).
Dhacdadii labaad: Beri dambe oo Maxamed Ibraahim Hadraawi uu gaashaan-qaaday oo uu weynaadey horraantii 1970nadii, ayaa waxa uu baabuur Bas ah (Siteey ma noogto ah) ka raacayaa Faras magaalaha Muqdisho, isaga oo u sii kicitimayey dhinaca Hooygii uu ku noolaa oo ku yaalley dhismihii Kulliyadda Lafoole ee Afgooye. Rakaabkii Baska waxa ka mid ahaa qof dumar ah oo dhallinyar oo isa-sidata (ilmo yar xambaarsan). Ilmihii yaraa ayaa gaajooday oo ooyey. Waxa ay gabadhii aragtay dad rakaabkii ka mid ah oo karahsanaya qaylada ilmaheeda, waxay markaas isku dayeysaa in ay ilmaha sasabo iyo koolkoolin ku aamusiiso, haseyeeshee taasi way u socon-waydey oo oohin buu ka sii qaaday. Inkstoo rakaabku ay rag iyo dumarba ka koobnaayeen, haddana bilcantii mar-curadka ahayd ma aanay danayn indhaha ku soo maqan, balse waxay soo saaraysaa naaskeeda oo ilmihii afka u gelinaysaa oo jaqsiinaysaa! Markii ay nuujisey ee uu dhergey, ayuu ilmihii qosol iyo farxad la hadaaqayaa oo cayaarayaa! Wax yar ka dib ayuu ‘ban’ ka wareegayaa oo isku xaarayaa. Hooyadii da’da yarayd markii ay ogaatey mashaqada ilmaheedu golaha keenay ayay qajishey oo naxday, waxanay isku dayday in ay saxarada ilmaha oo dhabteedii soo dhafaysa ku ururiso maradeeda, si aanay dhulka u gaadhin ama dadku aanu u arag. Waxa ay xagga hoose ka soo gurtay toobkii iyo googaraddii ay xidhnayd oo marba ku qabatay saxaradii ilmaha ilaa ay bawdeedii ka qaawanaatey! Dadkii baska la socdey oo Hadraawi ka mid ahaa, waxa ay u qaybsameen in karahsata oo nebcaysata dhacdada gabadhaaas iyo ilmaheeda iyo in ku sigata matag oo hayn kari waydey urtii. Qaar sanka ayay ka qabsadeen, qaar kalena waxa ay baskii kaga degeen meel ka sokaysa halkii ay ku socdeen, kuwo kalena waxa ay ku qayliyeen oo weedho aan habboonayn ku hiifeen hooyadaas! Hadraawi waxa uu ka mid noqday koox fara-ku-tiris ah oo la safnayd hooyada, kana soo jeeddey dhankeeda. Naxariista hooyanimadu waxa ay gabadhaas ka tallaabisay soohdihii xishoodka markii ay naaskeeda ku soo saartay, bawdadeena ku qaawisey raga hortiisa, sidii Kaaha Jaamacba (Hadraawi Hooyadii) ay u waydaarisey hooyanimadu soohdinta cabsida iyo baqashada markii ay ci’da libaaxa, qabowga roobka iyo madowga habeennimo midna ka gabban-waydey ee ay u timid halkii ay inankeeda ku ogayd!
Maxamed Ibraahim Warsame waxa uu Siteey ma- noogtadii (Baskii) kaga daadegayaa Maxadaddii (Boosteejadii) ugu dhowayd hooygiisa Lafoole, halkaas oo Cabbaar looga sii lugeeyo Kulliyadda Lafoole. Intii uu haddaba Hadraawi jidka sii hayey ee uu sii socdey, ayaa waxa maanka iyo maskaxdiisaba ku noqnoqonaya oo uu dib u sawiranayaa dhacdadii ka aloosnayd baska uu ka soo degey iyo Rakaabkiisii, gaar ahaan hooyadii da’da yarayd iyo ilmaheedii . Waxa kale oo taasi Hadraawi ugu xidhmaysaa dhacdooyin iyo xusuuso hore, gaar ahaan golihii geela ardaagiisa iyo dhawaaqii Hooyo Kaaha ee carruurnimadkiisii. Halkaas ayaa labadaas dhacdo ee kala dambeeyey, wakhtiga dheerina u dhexeeyo, waxa ka dhalanaysa heesta xigmadda iyo murtida ma-guuraanka ah xambaarsan ee “Hooyo”.
Tiro lagu helayn,
Hor ilaahay geystiyo
Hooyoy lagu xasuustaa.
Hir markii la gaadhaba
Ku hagoogta dhiiggoo
Markaad hoobal caanoo
Hal-abuur dhasha baa
Sida hawd caleen wayn
Rag u wada hamuumee
Nabad lagu helaayoo
Hidde lagu arooraay.
Heestan Hooyo waxa ay tilmaamaysaa intan oo nin rag ah iyo inteer oo marwo dumar ah oo hooyo dihatey; dhashay oo dhabarka saartay; habtay oo haaneedka jaqsiisay; u soo heestay oo ay soo koolkoolisey; soo barbaarisay, bulshadana ay iyadu dhex keentay. Haddaba saddex nin oo ay maansadu ka faalloonayso, ayaa lagu tilmaami karaa arrin ay maansadani gaar isaga leedahay oo ay ka sheegan karto kulmintooda maanso kale oo kastaba. Saddexda nin kan hore waa Lama-hure oo ah nin aan laga maarmi karin; waa deeqsiga la isku soo halleeyo gurigiisa iyo maalkiisa ee martida u looga, hor Alle wax u baxsada, qofka baahanna diihaalka gaajada ka reeba. Ninka labaad waa La -higsade Waa nin wax hubin yaqaan, wax oddorosi kara oo hillaadinta iyo hagista ku xeel-dheer, waana hoggaamiye daacad ah oo lagu daydo talaabo kasta oo uu qaado, loona aayo taladiisa iyo hoggaamintiisaba. Ninka kale ee saddexaadna waa Kala-hage; xilliga colaadda waa geesi halyey ah oo aan gabbashada aqoon, marna waa nabad-doon garyaqaan ah oo dadka kala hagaaja oo kala gura, xaqana hoos u daya oo aan dhinac u xeebashada iyo eex u suxul-duubka aqoon.
Beri Samaad Waa Badnaa
Haduu beerku qaybsamo
Badh baan adi ku siin laa
Waan kuu bedeli laa
Kaagana waan la bixilaa
Waa booli dhiiguye
Nafta laba bahood noqon
Badhkaagaan ku siin laa
Biyo haddaad cabaysona
Bisinkaan ku dari laa
Bohod baan uga dhigi laa
Illaah waxan baryaayaa
Barkhad inaad ku waartoo
Aakhirana bishaariyo jamada
Kusoo Dhawaaw Hoyga hooyo macaan qoraa sare maanka